Shadowgun Ngano: FPS yepamhepo – Kubiridzira&Kugura – Android Cheats Matipi
Shadowgun Ngano: FPS yepamhepo – Kubiridzira&Kugura
Na admin | Mbudzi 23, 2021
❓ Kunakidzwa nevapfuri vepamhepo uye mitambo yepfuti yevazhinji? Unoda here kuwana chisikwa chitsva chose, uraya vamwe vatorwa vasina kunaka uye kunwa mune spacebar? ❓
❗ Dhawunirodha Shadowgun Legends – Prestigious FPS Shooting Game ❗
★ Mubairo-kuhwina Chiito Chekutanga-munhu Shooter ★
Zvakasikwa zviri kurwiswa uye mutsara wekupedzisira wekudzivirira ndiwo maShadowguns – varwi vengano, magamba nevaratidziri. Irwa nekupinda kwevatorwa munyika yeSci-fi yeShadowgun Legends. Gamuchira mafambiro ako uye ubatanidze chiitiko mune epic nyaya yemushandirapamwe, kukwikwidza PvP kana kubatana kwevazhinji! Ratidza girazi uyo ari wekupedzisira kupfura uye uve Ngano!
Hunza shamwari dzako kune yakanyanya Co-op inowanikwa kune yega mishoni, mugomba nenhandare. Joinha sangano kana gadzira yako uye tamba mitambo yevazhinji pamwe chete! Kunzwa kushamwaridzana? Shanyira Brno, dhorobha redu rekudonha uye usangane neshamwari nyowani muhubhu kana mubhawa! Apex yezviitiko zvako zvakamirira!
★ Nyaya Inonakidza Campaign ★
Pfura vatorwa uye urwire kupona kwevanhu mune epic nyaya yemushandirapamwe mumazana emamishini anotenderera mhiri. 3 mapuraneti akasiyana-siyana. Yese mishoni inotambika mu-co-op uye inoremerwa nematani ezviitiko zvekushanya uye kupamba!
★ PvP Multiplayer Hondo ★
Kwikwidza muPvP yevazhinji mutambo modes. Dzvanya shamwari kurwa kwemazuva ano mu1v1 duel kana kujoinha timu mune dzakasiyana siyana tactical 4vs4 mitambo yevazhinji! Kufambira mberi kuburikidza nemakwikwi ekutungamirira mabhodhi uye usvike pamusoro peLegends!
★ Epic PvE Looter Shooter ine Raids uye Arenas ★
Joinha mauto neshamwari uye pfura hofori mabhosi kuti akudzwe uye nengano kupamba pamwe chete. Irwa uye ukunde kutyisidzira kwevatorwa muHondo Mitambo Arenas uye Special Dungeons chete panharembozha dzako! Chokwadi Hardcore Kupfura PvE FPS Chiitiko!
★ 700+ Yakasarudzika Super Futuristic Pfuti★
Sarudza kubva kwakasiyana pfuti kusanganisira Pistols, Assault Rifles, Sub-Machine Pfuti, Heavy Machine Pfuti, Pfuti, Sniper Pfuti, uye Rocket Launcher. Sarudza pfuti yakarurama uye usunungure bongozozo!
★ Kusingaperi Customization Sarudzo ★
Unganidza pamusoro 1000 zvidimbu zvezvombo zvefuturistic. Edza akasiyana Paint Cans, Makanda nemanamira. Gadzira ako ega ega akasarudzika ezvombo seti! Sarudza chimiro chako - ratidza halo kana nyanga, uye unakirwe!
★ Pamusoro peazvino controller mitambo inoenderana ★
Sarudza pakati pekubata kutonga kana yakagadziridzwa virtual joystick! Yedu yakasarudzika FPS inodzora system inotenderwa nemamirioni evatambi pasi rese. Gamepads rutsigiro inosanganisirwa! Kudzora kuri nyore neauto-fire kupfura kunoita kuti utarise chete pakupona kwako.
★ Iva Ngano ★
Kufambira mberi kuburikidza neFame System iyo inopa mibairo yako yese chiito. Kunyanya iwe kutamba, unonyanya kuzivikanwa – uye zvakanyanya kuita nyika kune zvaunoita! Zadzisa magumo ako uye uve ngano!
Isu tinosundira miganhu yezvinogoneka pane nharembozha! Shadowgun Legends inofema-inotora f2p yepamhepo kupfura ine magiraidhi makuru anodzima mitsara pakati peconsole uye mobile mutambo..
★ Kuzvipira kune Quality ★
PaMADFINGER Mitambo, isu tagara tichizvidenha kuti isusundire miganhu yenhare FPS mitambo yepamhepo kune iyo console-mhando. Mamirioni evatambi akafuridzirwa nemaitiro edu matsva, yekucheka kumucheto magiraidhi uye chaiyo FPS kudzora. Isu tanga tichigadzira yakanakisa FPS kupfura mitambo kubvira 2010. Vanyori ve Dead Trigger, Dead Trigger 2, Asina kuurayiwa uye Shadowgun Hondo Mitambo, vekutanga-munhu chiitiko kupfura vakadhawunirwa nevatambi vanopfuura 200M, tinokuunzira iyi yekupedzisira yevazhinji yemahara-yekutamba shooter!
★ Join Yedu Community ★
Chikamu: Kubiridzira uye Kubiridzira kana Matipi Matagi: CheatsHack, FPS, Legends, Online, Shadowgun
← Multi Maze 3D – Kubiridzira&Kugura Brick Out – Pfura bhora Cheats&Kugura →